Xafiiska komiishinka anshaxa iyo ka hor taga musuq maasuqa ayaa sheegay in la sameeyay musuq lagu qiyaasay lacag ka badn 80 miliyoon oo bir oo musq ah. - ዜና ከምንጩ
xafiiska koomiishinka anshaxa iyo ka hor taga musuq maasuqa ayaa sheegay in baadhitaan u sameeyay ku ogaaday in danbiyo musuq maasuq oo kala duwan la sameeyay kuwaasi oo kala ah lacag dhan 67 milyoon 642kun iyo 635 bir, labo gaadhi iyo dhul 521kun iyo 415 kare mitr ah oo la xanibay.
Waxa intaasi dheer in u gudoonsiiyay xafiisku dawlada16 milyoon 927 kun iyo 462 bir iyo 640 kare mitir oo dhul ah.
War bixin ay soo sareen xeer ilaaliyaha gud ee maxkamada iyo koomishinka boliiska ayaa sheegaysa in falal danbiyo ah oo la xidhiidha musuq maasuqa oo kala ah 22 milyoon 643 kun iyo 986 bir oo lacag ah iyo dhul 216 oo kare mitir ah iyo 5 kiintaal oo qamadi ah sida oo kale 11 guryo oo viila ah in ay xaniibeen.
Koomishiinka booliska oo u waramay wargayska addis maleda ayaa sheegay in dawlada ay gudoonsiiyeen 40 milyoon 762 kun iyo 853 oo bir oo lacag ah iyo 6601 kare miti oo dhul ah, 685 jiingado ah, 3 baakidh oo masaabir ah iyo 5 koonbiitar oo laptopyo ah.
Waxa kale oo koomiishinka booliisku u sheegay in inta badan lagu ogaado danbiyada musuqa ah oo ay dadku soo sheegaan, waxaana na soo gaadhay 109 danbi oo far fiiq naloogu sheegay waxaanan hor keenay sharciga oo lagu eegaya.
Waxaana la sheegay in far fiiqaas soo gadhay booliska 71 ka mid ah si loogu sameeyo baadhitaano dheeraad ah loo diray federaalka addis ababa iyo diridhabe. Sida oo kale 9 ka mid ah arimahaasina loo gudbiyay deeganada amxaarada, oromada iyo koonfurta xeer ilaaliyaha guud.
Xog uruurinta wareega labaad ee ka hor taga musuq maasuqa oo u diyaarinayo koomishinka ka hor taga musuq maasuqa ee caalamiga ah ayaa waxa la sheegay in loo diyaar garoobay xog uruurinta oo warbixino laga soo uruuriyay federaalka iyo addis ababa sida oo kale xeer ilaaliyaha guud, wixi xog ah ee hadhsanna si loo soo ururiyo in dabo gal loogu jiro.
Waxa kale oo u koomishinku u sheegay in hawlaha dabo galka ee anshaxa si wax looga badalo loo smeeyay xafiis iyo maamul hage ah oo lagu hawlanyahay.
Waaxdan hagaha ah ee lagu samaynayo dabagalka anshaxa waxa loo isticmaalaya si loo uruuriyo xogaha, waana mid xaaladaha xiligaas tagan lagu samaynayo. Waxaana la ogaaday in 31 kun 599 haykalada dawlada iyo horumarka mashruucyada hantidooda lagu diiwaan gliyay,guud ahaana dalkana 1.5 milyoon 31 kun iyo 57 shakhsi hantidooda lagu diiwaan galiyay.
Waxaana warbixinta u soo saaray koomishinka booliska lagu ogaaday in koomiishinku si u uga hor tago musuq maasuqa u diyaariyay dhokumentyo heshiis ah oo u xeer ilaaliyaha guud ee federaalka iyo booliiska federaalka u wada shaqayn kula yeelan doono.
Sida lagu xusay war bixinta usoo saaray koomishinka boolisku 3kun iyo 355 shakhsi oo isugu jira madax iyo shaqaale oon soo diwaan galin xiligi loo qabtay hantidooda in la ganaaxay kun kun biro oo ay soo diiwaan galiyeen hantidoodi, sidaas darteedna dawlada loo soo xareeyay lacag dhan 3 milyoon 355 kun oo bir.
Waxa xusid mudan in imika ka hor u wargayska addis maleda u soo qoray in la qorsheeyay 620 shakhsi oo hantidooda soo diiwaan galiyay lagu sameeyay dabo gal ah in hantida ay diwaan galiyeen ay sax tahay iyo in kale ayaa waxa la hubiyay in 346 ka mid ah ay sax tahay hantida ay soo diiwaan galiyeen, sida oo kale 10 ka mid ah ayaa hantidi ay soo diwwan galiyeen iyo dabo galki lagu sameeyay hantida ay haysteen farqi wayn u dhaxeeyay, sidaas darted xogti la soo ogaaday oo laga tix raacayo ayaa waxa lagu soo oogay dacwad oo loo diray dacwadoodi booliiska federaalka iyo xeer ilaaliyaha guud.
የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ ለ10ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የልዩ ኃይል አባላት አስመረቀ የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሌጅ በዛሬው ዕለት ለ10ኛ ዙር ያሰለጠናቸውን የልዩ ኃይል አባላት በባዕከር… https://t.co/OZTe5fuseP
Total views : 7505428